उल्का पिण्ड ठोकिँदा बनेको ताल, रहस्यमै छ किन पानीमा आइरहन्छ बदलाव ? - Sitemap
Loading... उल्का पिण्ड ठोकिँदा बनेको ताल, रहस्यमै छ किन पानीमा आइरहन्छ बदलाव ?
बिहानको घाम झुल्केसँगै छ दशक पार गरेका साइला गुरुङ सेती नदीको किनारमा पुग्छन् । बालुवा चाल्ने र बोकेर बाटोमा ल्याउने उनको दैनिकी जस्तो नै छ । उमेर ढल्की सकेकाले शरीरमा तागत छैन, तै पनि सक...